ammaanka oo ka mid ah hababka aad ula xiriirayso bulshada qaxootiga iyo muhaajiriinta | USAHello | USAHello
<span lang ="ar">ammaanka oo ka mid ah hababka aad ula xiriirayso bulshada qaxootiga iyo muhaajiriinta</taako>
Sites, Continue, baraha bulshada
Badbaadada iyo ammaanka oo ka mid ah hababka aad ula xiriirayso bulshada qaxootiga iyo muhaajiriinta
Sidee si ammaan on warbaahinta bulshada? Talooyin Safety for Media Social
iyadoo dad cusub Xariirinta waa wax fiican, gaar ahaan marka aad kaligaa tahay soo galootiga ah. Waxaa laga yaabaa in aad dareento cidlo oo dalka Mareykanka ah, baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram kaa caawin kara inaad dareento badan oo ururka cusub ee dalka. Laakiin waxaa kale oo uu noqon karaa mid khatar ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad fahmi khataraha, oo aad naftaada ku badbaadin kartaa on warbaahinta bulshada. Halkan macluumaadka si ay u caawiyaan in ilaalinta habka isgaarsiinta bulshada.
Baro ammaanka oo ka mid ah hababka aad ula xiriirayso bulshada
Marka la xiriira dadka on habka xidhiidhka bulshada, waa in aad isticmaasho digniin la mid ah in aad samayso si aad badbaadada nolosha dhabta ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin si ay kaaga caawiyaan in ammaanka oo ka mid ah hababka aad ula xiriirayso bulshada.
Yeelo gaarka ah
Ama sawiro shakhsi online ma ka qayb jeclaan lahaa tafaasiil si sharad qof, sida tababaraha. Waxaad u malayn kartaa in aad kaliya ku lug saaxiibada kuu dhow iyo qoyska, laakiin mar jirto wax internetka, in la sii ballaadhan wadaagi karo. Sidoo kale, marka aad ku xiran yihiin Internet-ka, waxaad kama saari karaan waxa ka mid ah, maxaa yeelay dadka kale leeyihiin nuqul ka mid ah. Qaar badan oo ka soo hijrooday dadka ama aad diido in aad shaqo hesho sababtoo ah profiles ay Internet-ka.
Waxaad marna u baahan doontaa inaad bixiso macluumaad shakhsi ah, sida aqoonsiga canshuur ama bangiga lambarada, sirta, ama erayo cinwaanka iyo lambarka. shabakadaha bulshada ku jira qaar badan oo ka mid ah goobaha gaarka ah in aad isticmaali karto si aad macluumaad ammaan. In Kuwa soo socda guide fudud About sida loo maareeyo warbaahinta bulshada oo dhan meelo kala duwan gaarka ah.
khubarro ka tirsan amaanka Internet waxaa had iyo jeer lagula talinayaa in ay leeyihiin a passwords xoog leh oo kala duwan for our erayadan oo dhan xisaabaadka. Sida Ansahonna isticmaalaya sugida laba geesood ah (tallaabooyin dheeraad ah si ay u gasho) Ama maamulaha password. Waxaad garan kartaa maamulayaasha passwords halkan.
Ka fikir ammaankaaga in aan xiriir sidoo kale
Ka fikir ah ee ammaanka ee dunida dhabta ah markii ay daabacaan macluumaad ku saabsan hawlaha aad. Uma baahnid in aad si aad u hesho cinwaanka aad online ka dibna daabacaan photos fasax inay ku wargeliyaan qof kasta in aad ka maqan tahay. Haddii la daabacay on Facebook halka qoyskaaga fasax, dadka ogaan doonaan inaan gurigaaga waa faaruq.
Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood aad u daabacaan laga yaabaa in meesha aad ama “helitaanka” Places. Ka feker in aad taas samayn ama aan.
Noqo mid aad u taxaddar haddii aan la kulmay qof kale oo aan isaga la kulmay online
Samee warbaahinta bulshada si sahlan loogu talagalay dadka si ay isu aqoonsadaan. Online, waxay iska kartaa in qof kale. Haddii aad soo wacdo qof Internetka, Ha diyaarin qof in la kulmo oo keliya ama gurigaaga tag ama wac gurigaaga haddii aad taqaan cidda ay yihiin. Had iyo jeer la kulmay shisheeyayaal meel dadweynaha iyo marka ay jiraan dad kale oo aad ku xeeran.
Ha rumaysan wax kasta iyo qof kasta oo
Waxaan wax badan ka bartaan maalin kasta ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo warbaahinta bulshada inuu ku khiyaaneeyo dadka. Dad badan oo macluumaad ku saabsan warbaahinta bulshada waa sax ahayn. Mararka qaarkood, dadka aan haysan xirka bulshada dadka dhabta ah, oo inta badan wax run ma aha at dhan. Waxaa laga yaabaa in dadka ama magacyo been ah “Boot” (been abuur ah robot). wararka been abuur ah ama muuqaalka rasmiga ah ee fariimaha iska ahaan ka rasmiga ah ee dawlada ama rasmi ah ganacsiga waxaa laga yaabaa in.
Ha rumaysan wax kasta oo aad ka akhrisan. Haddii aad akhrido wax, hubi oo laga helay ilo kale.
Haddii aad hesho fariin Internet-ka ayaa sheegay in ay tahay oo ka socda dawladda ama shirkad ah, aadan ka jawaabin macluumaad shakhsiyeed.
Ha lacag ama passwords diri
Ha lacag cid diro marka aan 100% la hubiyo in ay yihiin sida ay iyagu yidhaahdaan. Ha u sheegin xafiisyada dawladda, sida IRS Maraykanka, iyo ganacsatada dhabta ah, sida Microsoft, lacagta si toos ah u xisaabaadka bangiga qalaad diraya. Eraygaaga ma weydiin wax. Ha aad password qof diri online.
Naftaada badbaadi ka Qoom dood badan ama aan Allatifin
Waxaa laga yaabaa in ay beegsadaan qaxootiga iyo muhaajiriinta colaad ama dadka aan naxariis lahayn. codsiyada saaxiibtinimada aan la aqbali dadka ka aadan aqoon. Block isla markiiba qof kasta oo wax ku hanjabo mid ka mid ah xisaab aad daabacdaa. Ha ka jawaabin. Ha ku qorin wax Word ama colaadeed laga yaabaa inaad diirada more. Report hanjabaad gaarka ah si ay bilayska iyo warbaahinta goobta iyo bulshada, oo ay ku jiraan la daabacay.
Naftaada badbaadi ka fiisa iyo Anonymous
Ha riix links idiin soo diray, waayo,, xataa haddii ay ka yimaadaan saaxiib (Waxaa laga yaabaa inaad ogayn in link khatar ah, ama laga yaabaa in lagu xad gudbay). Just tirtirto. Waa wax muhiim ah in aad ma noqon doonto sidan. U badan tahay in ay xiriir la looma baahna ku jira fayrusyada in dhaawici doonaa your computer ama u oggolaan in dadku aad xadid macluumaadkaaga iyo lacag iyo aqoonsiga. Oo waa inaad xusuusataa dalab kasta oo u muuqataa mid aad u fiican in ay run si aan la rumaysan karin! Haddii aad hesho fariin sheegaysa in aad heli doonto lacag aad u badan ka qof aadan aqoon, waxaa tirtirto!
Isticmaal warbaahinta bulshada si uu kula xiriiro dadka daryeela oo ku saabsan, laakiin ma saacadood ku qaataan Tngers on raadinta waxyaabo aan muhiim ah in dunida dhabta ah. shabakadaha bulshada waxaa loogu talagalay inay la xiriiraan shirkadaha iyo codsiyada si ay u sii aad caadaysatay. Sidaas lacag.
Ka dhig nabadgelyada carruurtooda aad
Xitaa haddii aadan isticmaalin habka isgaarsiinta bulshada ama faham, waxaad u baahan doontaa in la ogaado oo ku filan oo ku saabsan in ay sii ammaan kids aad. Haddii aad isticmaasho warbaahinta bulshada naftaada, ilaali carruurtaada by aan gelinaya macluumaadka iyaga oo ku saabsan internetka. Haddii aadan isticmaalin warbaahinta bulshada aadan, weydii carruurtaada oo ku saabsan shabakadaha bulshada ay isticmaalaan. Waxay la kulmi karaan xoogsheegashada, bahal galmada, iyo waxa ku jira xayeysiis xun. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah macluumaad wanaagsan oo ku saabsan ilaalinta carruurta aad online. Waxaa ka mid ah talooyin carruurta ee dhowrayay nabadda iyo liiska warbaahinta bulshada ee kala duwan si ay u ogaadaan.
khubaro farsamo badan oo ku talinaynaa soo jeedinaya carruurta yar yar la isticmaalayo kaliya phone a smart ama computer ah idinka soo hor jeedda. Waxaad haysan doontaa in ay go'aan la xiriira ilmahaaga, laakiin khubarada badankooda waxa ku talinaynaa in aysan ogolaan in caruurta inay isticmaalaan telefoonada smart ama kombiyuutarada qolalka ay waqti habeen.
Ammaanka iyo bulshada hab-gaarsiinta u ah dhallinyarada
Gaadhista dhibaatayn Internetka waa walaac weyn dhallinyarada. Tani waa waxa loogu yeero e-bullying. Marka dhallinyarada ah Mottagsidin dhallinyarada kale ee online. Haddii kids aad kadeeday, xoogsheegtay aan la warsan. Website-kani waxa ku jira dhibaataynta elektarooniga ah Talooyin faahfaahsan oo loogu talagalay dhallinyarada Ay ka mid yihiin xaashiyo macluumaad ah oo ku saabsan ammaanka telefoonada gacanta iyo daawado content galmada iyo mawduucyo kale oo.
Maxaad waxa loo yaqaan habka isgaarsiinta bulshada?
Social ka dhigan tahay wax la xidhiidha bulshada ama koox, sida hawlaha saaxiibtinimo iyo is dhexgalka dadka kale. Media waa qaabka ereyga dhexe, habka channel ama xiriir. warbaahinta Waxaan u isticmaali loola jeedaa mass communication, sida TV-ga, raadiyaha ama internet.
Waa maxay habka isgaarsiinta bulshada?
shabakadaha bulshada waa shabakadaha ama siyaabo inay dadka kale la xiriiraan. Ay ka mid yihiin shabakadaha bulshada iyo Facebook, Twitter,Snape fuuleen iyo Instagram – Qof kasta oo
Codsiga ama website a kaas oo ula xiriiraan dadka aad taqaan ama ma oga. LinkedIn shaqeeya sida shabakad bulsho, laakiin shaqooyin iyo xirfado. qolalka Chat iyo goobaha(maslaxadda)Ma noocyada kale ee warbaahinta bulshada. Xitaa YouTube waa hab ka mid ah xidhiidhka bulshada, sababtoo ah qof kasta daabici karo videos iyo comments waxaa.
Waa maxay sababta habka isgaarsiinta bulshada khatar ah?
warbaahinta bulshada waxaa laga yaabaa in halis sababtoo ah mararka qaar dadka ay isku dayayaan in ay isticmaalaan warbaahinta bulshada si aad u khiyaameeyaan. Waxaad isku dayi kartaa in aad warbixin aad ka heli. Mid ka mid ah habka ay u fahmaan khataraha in fikirka ku saabsan sida aad la dhaqanka dadka aad taqaan oo idinkuna waxaad ogaan nolosha dhabta ah. si xor ah ula xiriiraan kuwa aad u ogaato iyo kalsooni – Qoyskaaga iyo saaxiibadaa Almqrbin.kn more taxadir leh dadka aan ogahay ama isku yimaadeen si ay To.la u sheegto wax kasta oo ku saabsan nolosha shakhsiyeed. Iyaga ha ka siiyo lacagtaada ama muhiimka ah gurigaaga. Isticmaal hab this ammaanka ee hab ee xidhiidhka bulshada sidoo kale waa.